बैंकलाई दोष दिने, डाकू होइन Martech Zone
बैंकलाई दोष दिने, लुटेरा होइन
मङ्गलबार, जनवरी 6, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
त्यहाँ ब्लगहरू र साइटहरूको एक आक्रमण हो जुन केहि ध्यानयोग्य खाताहरू भए पछि ट्विटरको मृत्युको पूर्वानुमान गर्दै hacked। केहि साइटहरूले आश्चर्य र ट्विटरको साथ ह्याकरको बारेमा कुरा गर्छन् संग तिरस्कार (एक महामारी ?!)। संसारमा के मानिसहरु संग गलत छ?
सत्य भन, मैले फेला पारे केहि सन्देशहरू द्वारा छोडियो ह्याकर धेरै हास्यपूर्ण हुन। त्यसो भन्दैमा मैले हैकरलाई उत्तरदायी छैन भनेर भन्नु हुँदैन, यद्यपि। उनले स्क्रिप्टहरू प्रशोधन गर्ने निर्णय गरे जुन एक ट्विटर प्रशासकमा शब्दकोश हमला गरे। उसको आक्रमणले काम गरिसकेपछि, उनले लग-इन गरे। लग-इन गरेपछि उनले अरू खाता पासवर्डहरू पुनःसेट गरे। उसले पासवर्ड परिवर्तन गरे पछि, उनले उनीहरूको खाताहरूमा लग इन गरे। त्यहाँ छन् तारमा ह्याक को पूरा विवरण.
ह्याकरले अपराध पनि फिल्मायो र अनुसरण गर्न एक राम्रो ट्रेल छोड्‍यो:
ट्विटर एक ई-वाणिज्य कार्यक्रम हैन, तपाइँको क्रेडिट कार्ड डाटा होल्डिंग। ट्विटरसँग तपाईको सामाजिक सुरक्षा जानकारी छैन। ट्विटर बहाना छैन वा एक सार्वभौमिक प्रमाणीकरण प्याकेज हुन को लागी कोशिश गर्दैन। ट्विटरको अभिप्राय यस्तो हुन नदिनु हो। जबकि सुरक्षाको सर्वोत्तम अभ्यासहरूमा उनीहरूको दृष्टिकोण अभाव भएको हुन सक्छ, तर यो अझै तिनीहरूको गल्ती छैन कि त्यहाँका कोहीले तिनीहरूलाई ह्याक गर्ने निर्णय गरे।
कल्पना गर्नुहोस् ट्विटर एक बैंक थियो र हैकर लुटेरा थियो। जब बैंक-लुटेरा सुरक्षा मा त्रुटिहरु खोज्न को लागी काम गर्दछ र अन्ततः तिहाई तिर्न सुरक्षित गर्छ, के हामी बैंकलाई दोष दिन्छौं? होइन, हामी गर्दैनौं।
ट्विटरले यसको प्रतिक्रिया दियो। यदि ह्याकरले सुरक्षा उल्ल .्घनको बारेमा ट्वीटरलाई सूचित गर्‍यो र तिनीहरूले यसलाई सुधार गरेनन् भने, म त्यसलाई उत्तरदायी राख्ने थिएँ। ह्याकरसँग त्यो गर्ने अवसर थियो ... तर त्यसो भएन।
टैग: टिटर पासवर्डtwitterट्विटर ह्याक
२०० in मा मोबाइल मार्केटिंग रणनीतिहरू सुरूवात गर्दै
जनवरी 7, 2009 मा 9: 45 एएम
"जब बैंक-लुटेरा सुरक्षा मा त्रुटिहरु खोज्न को लागी काम गर्दछ र अन्ततः तिहाईहरु सुरक्षित", हामी बैंक दोष? होइन, हामी गर्दैनौं? "
हामी गर्दैनौ? म बैंक अफ अमेरिकाका लागि काम गर्छु। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, बैंक हुनेछ बिल्कुल सुरक्षा कमजोरीहरूको लागि दोष दिनुहोस्। दुबै मिडियाबाट साथै यसका ग्राहकहरूबाट।
ट्विटरका लागि पनि यस्तै भन्न सकिन्छ। के यसको निधन ह्याकर्सको कारण हुने आक्रमण र अन्तिम क्र्यासबाट हुनेछ? हुनसक्दैन। तर धारणा यसको प्रयोगकर्ताहरूको साइट असुरक्षित हो, मलाई लाग्छ, यसले अन्य केहि SocNet साइटको बिरूद्ध सीमान्तीकरण गर्नेछ जसले आफ्नो प्रणाली सुरक्षित छ भनेर दावी गर्दछ। हुनसक्छ अब होईन, तर समय - र ह्याकर्सको लगत, राम्रोसँग, ह्याक - ले ट्विटरलाई उसको घुँडामा लानेछ।
जनवरी 8, 2009 मा 12: 45 एएम
तपाईले राम्रो बिन्दु पाउनुभयो। मलाई यसको साथ सहमत हुन मनपर्दैन, यद्यपि! 🙂